राष्ट्रिय परिचयपत्र 2077-06-11
राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुलीमा समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणका लागि नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको विवरण दर्ता गर्ने कार्य सञ्चालन भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन फारम यस लिङ्कबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
परिचयपत्रमा समावेश हुने विवरणहरु
राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउनका लागि योग्यता र पेश गर्नुपर्ने कागजात
नागरिकताको सक्कल सहित प्रतिलिपि लिई स्वंयम उपस्थित हुनुपर्ने ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट नेपाली नागरिकलाई हुने फाइदा
राष्ट्रिय परिचयपत्र कहाँबाट वितरण गरिन्छ ?
जैविक तथा वैयक्तिक पहिचान भनेको के हो ?
चिप्स भनेको के हो र किन प्रयोग गरिन्छ ?
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहने व्यक्तिगत विवरणहरूको गोपनीयता कसरी सुनिश्चित गरिएको हुन्छ ?
राष्ट्रिय परिचयपत्र हराएमा कसरी प्रतिलिपि लिन सकिन्छ ?